Rosia : Mampisara-kevitra Ny Mpiaro Ny Zon’Olombelona i Snowden · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2013 16:36 GMT
Rehefa tsy tazana tao amin'ny faritra fandalovana iraisampirenena (transit) tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Sheremetyevo, Moskoa efa ho iray volana izay ilay nifampiraharaha tamin'ny NSA teo aloha, Edward Snowden, dia nihaona tamin'ireo solontenan'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Rosiana sy ny depiote Rosiana Vyacheslav Nikonov. Nandritra ny fisehoany ampahibemaso tamin'ny 12 jona, dia Snowden made nanao fanambarana fohy i Snowden ary nandray fanontaniana avy amin'ny mpanao gazety (feo manontolo azo raisina ato [en+ru]) tao amin'ilay lazaina hoe “fihaonan'ny G9.” Notsikerain'i Snowden ny fitsarana miafin'ny governemantany, ny rafi-panarahamaso ny zavatra rehetra, ary ny fanentanana diplomaka mikendry ny tsy hahafahany mahita fialokalofana ara-politika. Nolazainy ihany koa ny fikasany hialokaloka amin'ny firenena izay mahantoka ny ainy ary nisaorany ihany koa ireo firenena nilaza ny hanampy azy:
Raha manohana tsy an-kiteniteny ny zo hialofan'i Snowden ny governemanta rosiana, dia misara-kevitra amin'ny maha-mpanaitra azy na mpihatsaravelatsihy mpamadika kosa ny Rosiana. Vao maika namelona izany adihevitra izany indray ny valandresaka nataon'i Snowden ( ao amin'ny vsombiin-dahatsary etsy ambany).
Ao amin'ny lahatsoratra am-bilaogy [ru] ho an'ny fantso-pampielezam-peo tsy miankina Ekho Moskvy, ny mpanao gazety sady mpikatroky ny zon'olombelona Natalia Gulevskaya no mamantsipantsika ireo mpikatroky ny zon'olombelona nihaona tamin'i Snowden, ka nilazany ireo ho karamain'ny fanjakana sy tia tena mpihatsaravelatsihy:
Mbola manaikitra kokoa ilay mpaneho hevitra ara-politika sady mpikatroky ny zon'olombelona Marina Litvinovich raha nanoratra tao amin'ny bilaoginy [ru] raha niteny fa tsy misy na inona na inona afa-tsy ny “fanaon'ny sampam-pitsikilovana mahazatra” ny valan-dresak'i Snowden ary “mandà ny handray anjara ao anatin'izany ny olona sy ny fikambanana tso-piaina.”
Miahiahy fatratra amin'ny fientanentanan'ny seranampiaramanidin'i Sheremetyevo amin'ny fanampiana ireo mpikatroka piaro ny zon'olombelona i Pavel Chikov, mpitarika ny ONG amin'ny fiarovana Agora [ru] sady mpikambana eo amin'ny Vaomiera prezidansialy misahana ny zon'olombelona. Hoy ny siokany [ru]:
Tadidiko ny tamin'ny desambra 2011 [taorian'ny fifidianana Duma] nisambotra sy nitazona tsy ara-dalàna ny solosaina findain'ny talen'ny GOLOS [ru], vondrona mpanara-maso ny fifidianana] ny tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Sheremetyevo
Nieritreritra ilay bilaogera sy mpikatroka mpanohana ny ao Kremlin, Kristina Potupchik, fa tena misy fihatsarambelatsihy ao amin'ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona tsy mety miaro an'i Snowden. Maneso an-tarehy ratsy i Potupchick ao amin'ny lahatsoratra am-bilaogy nampitondrainy ny lohateny hoe “Edward Snowden, Fa maninona no mangina ny mpanohitra” [ru],
Efa mahazatra antsika ny mieritreritra, fa na dia tsy miala politika aza, dia matetika tsy miditra amin'ny raharaha maloton'ny antoko politika. Mety ho manana fifandraisana amin'ny fitondrana rosiana ny sasany manatrika ny valan-dresak'i Snowden, saingy misy ny hafa, tahaka an'i Tatiana Lokshina avy ao amin'ny Human Right's Watch, izay nanoratra tatitry [en] ny fihaonana, no tsy nitsahatra nitsikera ny fitondrana rosiana taloha. Mety hametraka ireo mpiaro ny zon'olombelona rosiana ho mpihatsaravelatsihy ny fandavana ankapobe avy amin'izy ireo hisolo vava an'i Snowden, eny fa na dia mety ho hitan-dry zareo ho mankaloiloy ihany aza ny hanampy olona iray mametraka an'i Rosia ho “voalohany manitsakitsaka ny zon'olombelona.” Noho ny lalàna manakenda ny sehatry ny ONG ao Rosia, tokony hanapa-kevitra amin'izay zava-dehibe kokoa ny mpiaro ny zon'olombelona ao aminy: manana fijoroana matotra eo amin'ny lohahevitra isan-karazany, na miezaka ny hisoroka ny tsy hahazoan'i Kremlin isa vitsivitsy eo amin'ny sehatry ny fifandraisana.